ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတစ်ဦး၏ အသက်ကို ကယ်တင်ရန် ကြိုးပမ်းစဉ် ရုရှားအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ကြီးသေဆုံး - Xinhua News Agency
မော်စကို ၊ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ရုရှားနိုင်ငံ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Yevgeny Zinichev သည် လူ့အသက်တစ်ချောင်းကို ကယ်တင်ရန် ကြိုးပမ်းစဉ် တာဝန်ချိန်အတွင်း သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနက စက်တင်ဘာ ၈ ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Arctic zone (အာတိတ်ဇုန်)အား အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ကာကွယ်ရန်အတွက် ရုရှားနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း Norilsk ၌ပြုလုပ်သည့် ဌာနအချင်းချင်းကြား ပူးပေါင်းလေ့ကျင့်မှုအတွင်း ဝန်ကြီး Yevgeny Zinichev သေဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
Zinichev သည် အသက် ၆၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ရုရှားနိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသော ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်သည့် Alexander Melnikအား ကယ်ဆယ်ရန် ကြိုးပမ်းစဉ် သေဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဒါရိုက်တာသည် အာတိတ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်သစ်ရိုက်ကူးရန်အတွက် မြေပြင်အနေအထားလေ့လာရန် Norilsk သို့ သွားရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသတွင်းမီဒီယာက ဖော်ပြခဲ့သည်။
“ Zinichev ဟာ ဒါရိုက်တာနဲ့အတူ ချောက်ကမ်းပါးအစွန်တစ်ခုမှာ ရပ်နေခဲ့တာပါ ၊ အဲဒီအချိန်မှာ ဒါရိုက်တာဟာ ခြေချော်ပြီး ရေစီးထဲပြုတ်ကျသွားပါတယ်၊ Zinichev ရေထဲ အလျင်စလိုခုန်ဆင်းသွားတာကို လူအများကြီးရှိနေပေမယ့် ဘယ်သူမှ ဘာဖြစ်သွားမှန်း စဉ်းစားဖို့တောင် အချိန်မရလိုက်ဘူး ၊ ဒါပေမယ့် ကျောက်ဖျာအစွန်လေး တစ်ခုနဲ့ရိုက်မိသွားပါတယ်” ဟု RT သတင်းဌာန အယ်ဒီတာချုပ် Margarita Simonyan က တယ်လီဂရမ်တွင်ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။
ဝန်ကြီး Zinichev ရော ဒါရိုက်တာ Melnik တို့နှစ်ဦးစလုံးကို ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်စဉ် ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်မှာပဲ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကြောင်း သတင်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။
Zinichev နှင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့သော ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတ ဗလာတီမာပူတင်က ဝန်ကြီး၏ကျန်ရစ်သူမိသားစု နှင့် မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းများအတွက် ၎င်း၏ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်ဟု ကရင်မလင်နန်းတော်က ဆိုသည်။
ရုရှားနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး Sergei Lavrov က Zinichev သည် “ တကယ့်ကယ်ဆယ်ရေးသမားတစ်ဦးလို ပြုမူဆောင်ရွက်ခဲ့တာပါ” ဟု ပြောကြားခဲ့ပြီး ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Sergei Shoigu က သူ့ကို အမြဲအမှတ်ရနေကြမှာပါဟု ဆိုသည်။
အသက် ၅၅ နှစ်အရွယ်ရှိ Zinichev သည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ရုရှားနိုင်ငံ၏ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ကြီး ဖြစ်လာခဲ့သူဖြစ်သည်။(Xinhua)
MOSCOW, Sept. 8 (Xinhua) — Russian Emergencies Minister Yevgeny Zinichev has died on duty while attempting to saveaperson’s life, the ministry announced on Wednesday.
The tragedy happened during interdepartmental drills in north Russia’s Norilsk to protect the Arctic zone from emergencies, it said.
Zinichev was trying to rescue Russia’s well known film director Alexander Melnik, 63, who travelled to Norilsk to pickalocation for his new documentary on the development of the Arctic region, local media reported.
“Zinichev was standing with the director at the edge ofacliff. The director slipped and fell into the water below. No one of the many eyewitnesses even had time to figure out what had happened as Zinichev rushed into the water but crashed againstaprotruding rock,” RT Editor-in-Chief Margarita Simonyan said on Telegram.
Both Zinichev and Melnik died inahelicopter to hospital, according to reports.Russian President Vladimir Putin, who has worked together with Zinichev for many years, expressed his deepest condolences to the late minister’s family and friends, the Kremlin said.
Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said Zinichev “acted likeatrue rescuer” and Defense Minister Sergei Shoigu said he would always be remembered.
Zinichev, 55, became the emergencies minister in January 2020.Russian Emergencies Minister Yevgeny Zinichev launchesalarge-scale experimental research training in the Arctic zone in the city of Dudinka on Sept. 7, 2021. (ministry photo)